कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्ने विषय कहाँ पुग्यो? खबरमञ्च
३० असार, खबरमञ्च, at 7:38 AM
By खबर मञ्च / July 14, 2020 / Comments Off on कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्ने विषय कहाँ पुग्यो?
काठमाडौं । सरकारले २०७७ सालको शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ११ का विद्यार्थीलाई नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षकको तयारीका विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार कक्षा ११ मा अनिवार्य विषय थप गरिए पनि त्यसको अध्यापनका लागि आवश्यक पर्ने हजारौँ जनशक्तिका बारेमा तयारी गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।
Last Modified: July 14, 2020 @ 7:38 am
गुड्न थाले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन